Ben Passer wuxuu ku biiray McKnight Foundation bishii Sebtember 2021 asagoo ah sarkaal sare oo barnaamijka barnaamijka Cimilada & Tamarta Midwest. Wuxuu kormeeraa oo horumariyaa faylalka deeq -lacageedka ee muhiimka ah oo taageera dadaallada lagu dhisayo awoodda iyada oo loo marayo iskaashi, isku -dheelitirka cimilada McKnight iyo yoolalka sinnaanta si loo hormariyo xallinta dhibaatada cimilada.
Passer wuxuu keenaa lix sano oo waayo -aragnimo ah isagoo ka shaqeynaya arrimaha la xiriira wax -ku -oolnimada tamarta, tamarta la cusboonaysiin karo, iyo koronto faa'iido leh, iyadoo xoogga la saarayo is -goyskooda sinnaanta jinsiyadda iyo caddaaladda deegaanka. Wuxuu ka yimid McKnight Tamarta Cusub, halkaas oo uu ku hago shaqada helitaanka tamarta ee sugtay natiijooyinka sharciyeynta ee Guddiga Adeegyada Dadweynaha iyo isbeddelka siyaasadda ee Xarunta Gobolka Minnesota. Wuxuu hormuud u ahaa abuuritaanka iyo kobcinta barnaamijka Fresh Energy ee Helitaanka Tamarta iyo Sinnaanta, wuxuuna horseeday kala duwanaanshaha ururka, sinnaanta, ka mid noqoshada, iyo hindisayaasha ka dhanka ah cunsuriyadda.
Qareen ruqsad haysta oo xubin ka ah Ururka Qareennada Gobolka Minnesota, Passer wuxuu haystaa shahaadada koowaad ee farshaxanka sayniska siyaasadda ee Jaamacadda Minnesota iyo dhakhtar juris ka haysta William Mitchell College of Law (hadda Mitchell Hamline School of Law). Wuxuu u shaqeeyaa guddoomiye ku -xigeenka guddiga Cimilada Cimilada: Hantida Xayawaanka ee Will Steger wuxuuna ku jiraa guddiga qaranka ee Beddelka GRID. Waqtigiisa firaaqada ah, Passer wuxuu ku raaxeystaa socdaalka, wuxuu ku farxayaa Miami Heat, wuxuu kabtan u yahay doontiisa pontoon, wuxuuna waqti la qaataa xaaskiisa iyo labadooda eey.